Huchapupu hutsva hunouya pakujekesa kwePad Pro ne mini-LED skrini | IPhone nhau
Hutsva humbowo hweiyo iPad Pro ine mini-LED skrini inouya kujeka
Runyerekupe rwekuti Apple ingadai iri kuronga kuvhura iyo nyowani iPad Pro ine mini-LED skrini. Isu tanga tichifungidzira nezve kuburitswa kweiyi modhi pane 12,9-inch screen saizi kwerinenge gore. Huye, makuhwa matsva abuda nezve yekugadzira tambo yeichi chigadzirwa.
Iyo poindi pane izvo zvisati zvave nekubvumirana pane nguva yatinogona kuona iyi nyowani iPad Pro ine mini-LED skrini pamusika. Pakutanga zvakataurwa kuti vanofanirwa kusiya kupera kwa2020 asi makuhwa apfuura achinongedzera kukota yechipiri ya2021.
In the yazvino Digitimes mushumo kana mhinduro inopihwa kune isingazivikanwe nezve zuva rekuburitsa, zvisinei, inoratidza humbowo hwekuti iyo Pro Pro neiyi tekinoroji ichave iri mukuvandudza.
Ennostar ichatanga kuburitsa mini-LED kumashure mwenje mayuniti (BLU) yeApple munguva pfupi iri kutevera.
Ennostar ichatangisa kugadzirwa kwe mini-LED skrini pakupera kwekota yekutanga ya2021 kana kutanga kwechipiri maererano nemaindasitiri masosi.
Sezvaunoziva, yazvino iPads uye MacBooks inoshandisa LCD skrini, iyo inoda "mbichana mbichana" kana backlights zvekuvheneka izvi. Aya mwenje ndeye LED uye zvinoenderana nesaizi yechidzitiro ivo vanogona kuitiswa kubva gumi kusvika kumazana acho mune imwe.
Mini-LED tekinoroji inobvumira madiki maUSS kuitwa iyo inobvumira makuru masikirini kuti aite zviuru zvavo. Izvi zvinopa kukura kukuru kwechiedza iyo inofarira mudziyo kuti uve nekupenya kwakakwirira uye kutitaridza isu vatema uye vatema chaivo.
Iyi tekinoroji hatifanire kuisanganisa ne microLED, sezvo ichi chiri rudzi rwechizvarwa chinotevera skrini iyo yatinotarisira kuti inozopedzisira yatsiva maOLED aripo.
Apple yanga ichishanda pahunyanzvi kwechinguva ikozvino uye tinotarisira kuiona munguva pfupi pane runyerekupe rwe 12,9-inch iPad Pro. Kune rimwe divi, zvinokwana zvakare tarisira izvi pa14-inch uye 16-inch MacBook Pro mamodheru.
Neraki kana nhamo, Iko hakuna kuve nekumwe kwakawanda runyerekupe pamusoro penyaya idzo dzinotevera iPad Pro ichaunza. Kunyangwe zvakadaro, ichaunza zvirokwazvo kuvandudzwa kweprosesa kana zvimwe zvemukati zvinhu zvinotsanangudza zvingagone kuvandudzwa kubva kune yapfuura iPad Pro (kana, zvirinani, kune avo vanoda kugara varipo kusvika parizvino).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Pro » Hutsva humbowo hweiyo iPad Pro ine mini-LED skrini inouya kujeka
Overcast inovandudzwa pamwe nechishandiso chitsva chishandiso cheApple Watch
WatchChat, yakanakisa WhatsApp app yeApple Watch yako [SWEEPSTAKES]